Ihe omimi nke ihe omuma: Ntucha ihe ntanetiri egwu Web
Ọtụtụ nde ndị ọrụ weebụ na-achọ ọtụtụ ihe na ịntanetị kwa ụbọchị . Ha na-achọ inweta ihe ndị dị mkpa, site n'ịchịkọta ozi niile ha chọrọ ozugbo ha kwere omume ma si otú ahụ mee ka azụmahịa ha na-aga n'ihu. N'ihi ya, ha na-ekpochapụ weebụsaịtị iji kpọkọta data niile ha chọrọ ma na-echekwa ya na kọmputa ha. Otu n'ime ngwá ọrụ weebụ kachasị na-ekpuchi weebụ , nke nwere ike wepụ data na anya nke anya, bụ Scrapy!
Nlekọta - Atụmatụ Mgbapụta Ntanetị Web Web dị egwu
Nlekọta bụ ihe dị ịtụnanya ngwa nchịkọta data weebụ nke mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike iji rụọ ọrụ ahụ n'oge ọ bụla . Ọ na-enye ndị ọrụ aka ilekwasị anya na nbudata data, site na iji ndị CSS họrọ. Ọgwụgwọ bụ usoro ihe Egwu nke na-enye ndị ọrụ ya niile nhọrọ zuru oke iji mezue ọrụ ha ma nweta data ha chọrọ n'enweghị oge - hosting windows gratis sin publicidad. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchekwa ha n'ụdị ụfọdụ na kọmputa gị.
Ndị ọrụ weebụ kwesịrị icheta na usoro ọgwụgwọ bụ ihe dị ịtụnanya na-enyere ha aka wepụ ọdịnaya niile dị mkpa, yana ịnyagharịa site na ibe ndị dị mkpa.
Nke mbụ, ị ga-etinye Python na sistemụ arụmọrụ gị. Mgbe ahụ i nwere ike ibudata usoro a site na saịtị ya.
Ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịmepụta ọrụ Scrapy mgbe ịchọta ndekọ ịchọrọ ịchekwa. Wee chịkọta data ha niile ma chekwaa ya n'otu ebe ịchọta ya mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Ụzọ kachasị mma ị ga-esi kpokọta data na nnukwu na Scrapy bụ iji Shekara ọka. Ị nwere ike iji Xpaths họrọ ụdị dị iche iche site na HTML akwụkwọ. N'ikwu ya kpọmkwem, a na-enye ọnyà Spray maka ịkọwa ụzọ ị na-esi agbaso njikọ dị iche iche site n'ịgba na ebe nrụọrụ weebụ. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike wepu ozi niile dị mkpa site na ibe ndị ahụ dị iche iche na usoro ihe ọmụma Python.
Iji nke Spiders
Site n'iji usoro ududo, ị nwere ike ibudata ọdịnaya ọ bụla ịchọrọ. Naanị ị chọrọ ide ederede omenala maka ọtụtụ ibe weebụ. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịde ederede iji tọghata data akpokọtara na usoro nke ọma ma debe ya na kọmputa gị.